XUKUMADDA PUNTLAND ILAALINTA AMNIGA TIMIRRE MA AWOODI WEYDAY? – Radio Daljir
Oktoobar 7, 2021 3:00 g 0
Wariye Timirre muddadii uu ka shaqaynayey warbaahinnada gaarka loo leeyahay iyo midda dawladdaba waxaa lagu yaqaannay in uu ahaa wariye dhiirran oo kudhac leh, oo aan caadsaarin soo gudbintiisa war, warbixin ama wareysi
Maxamed Cabdiweli Timirre wuxuu kamid yahay wariyaasha Puntland ee muddada sannadaha badan ah ku soo shaqaynayey mihnadda warfidiyeennimo, wuxuuna ka soo hawlgalay muddadaas xarumo kaladuwan oo warbaahineed oo Puntland ku yaalla.
Muddooyinkii dambe wuxuu ka shaqaynayey warbaahinta dawliga ah, wuxuuna kamid ahaa wariyayaasha iyo hawlwadeennada firficoon ee Raadiyaha iyo Telefishinka Puntland (PLTV), badankana bartiisa shaqo waxay ahayd magaalada caasimadda ah ee Garoowe.
Wariye Timirre muddadii uu ka shaqaynayey warbaahinnada gaarka loo leeyahay iyo midda dawladdaba waxaa lagu yaqaannay in uu ahaa wariye dhiirran oo kudhac leh, oo aan caadsaarin soo gudbintiisa war, warbixin ama wareysi, una soo bandhiga si xirfadaysan oo ay ku larantahay dhihitaan hadal iyo dhigaal qurxoon oo ah hadba dhinicii uu bulshada ka tusayo, wixii dhug iyo dhaayo, gefaan se waa meeshooda.
Timirre waxaa aad loogu sii bartay xilliyo adkaa oo Puntland soo maray oo uu xirfaddiisa wariyenimo uga qaybnoqday iyo soogudbinta xogta iyo xaqiiqooyinkii markaasi taagnaa ama dhacayey, xilliyadaasi oo iskugu jiray kuwo colaadeed iyo dagaal, kuwa abaareed, gurmad, gaargaar iyo biyodhaamin iyo kuwo kale oo xagga baraaraha u jinjeeray, balse gacmo mugweyn iyo gurmadba u baahnaa.
Intii uu u shaqaynayey dawladda Puntland, shaqaalahana ka ahaa warbaahinta dawladda, wuxuu nasiib u yeeshay in uu meelo badan kala hawlgalo ciidamada ammaanka Puntland, una bareero khataro badan isagoo gudanaya waajibaadyo shaqo oo saarnaa, lana xiriiray amniga dalkiisa iyo dadkiisa.
La hawlgaliddaasi ciidan ee wariye Timirre, middii ugu dambaysay waxay ahayd midkii hawlgalkii amniga Gaalkacyo, taas oo wax looga qabanayey dhibaato amni oo muddo 13 sano ka badan ka taagnayd magaalada Gaalkacyo, iskuguna jirtay dilal qorshaysan oo galaaftay nolosha wax-ku-oolkii bulshada, weeraro qarax iyo cabsigelin qarsoodi ah oo keentay in dad badan ka cararaan magaalada Gaalkacyo.
Hawlgalada amni ee magaalada Gaalkacyo oo muddo sannad ku dhaw si aan kala joogsi lahayn u socday, kuna wajahnaa Al-Shabaab iyo amniyaadkooda Gaalkacyo, Wariye Maxamed Cabdiweli Timirre wuxuu ahaa waax ka mid ah ciidamada hawlgalka, wuxuuna soogudbinayey tallaabo kasta oo la qaado iyo cidkasta oo dambi dad laysnimo ah lagu helo, taas oo doorkii ugu muhiimsanaa ka ciyaartay amniga, dadka gobolkana baraarujisay, kaddib marka ay daawadeen dadkii dilalka 13ka sano socday ka geysanayey Gaalkacyo oo midmid u qiranaya wixii ay gacantoodu goysay, oo haddana midmid iskuna marag iyo markhaati furaya.
Waxay ahayd shaqo masiiri ah oo wariye Timirre u qabanayey dadkiisa, dalkiisa iyo dawladdiisa intaba, isla markaasna ahayd khatar aysan fududayn in uu u bareero wariye Soomaali ah oo og duruufaha amni ee dalkiisa; hase ahaatee taasi ma dabrin wariye Timirre, wuxuuna doorbiday aamus intii uu ku dhimman lahaa, afkiisa iyo awooddiisa wariyenimo in uu uga qaybqaato ammaanka dalkiisa, bannaankana uu soo dhigo xogta urtumihii qarsoonaa ee muddada dheer qubayey dhiigga dadka muslimiinta ah ee ku nool magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo badankooda lagu laayey masaajidada, oo ah guryo u dhisan in Alle kaliya lagu caabudo, cibaadadiisana lagu oogo.
Soo bandhigga xogahaas quseeyey amniga magaalada Gaalkacyo iyo wareysiyo badan oo Wariye Timirre ka qaaday raggii Al-Shabaab ee loo qabtay falal dambiyeedyadii ka dhacay Gaalkacyo, dabadeedna lagu maxkamadeeyey, wuxuu Timirre kala kodlay cabsigelin badan, hanjabaado iyo handadaado amnigiisa la xiriirta, waxayna dhaxalsiisay in uu Puntland ka cararo duruufo amni oo soo wajahay dartood iyo gabbaad la’aan xagga dawladda ah oo awoodi wayday ama u quuri weyday in wariyahaasi u helo fursad uu amnigiisa ku ilaashado iyo kalsooni uu ku sii wato shaqadiisa, haddii ay ahaan lahayd ilaalo amnigiisa dhawrta ama gaari uu lugta ku badesho, maadaama uusan sidii hore u dhaqmi karin, masab xileed oo uu ku maato iyo meel amni ah oo uu degeanaado intaba.
Uma muuqato caqliyad sax, umana muuqato aragti qiimayn ku dhisan, in xukuumadda Puntland ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Siciid Cabdillaahi Deni ay garawsan wayday ama ay awoodi wayday amniga hal ruux oo amarkeeda iyo ujeedadeeda hawlfulineed ku eedoobay, waxayna taasi luminaysaa kalsoonida ruux kasta oo dawladda ku garab iyo gacansiin lahaa hawl dan guud ah iyo mid gaar ahaaneed intaba, waxayna hoos u dhigaysaa hanka iyo kalsooni ku qabidda dawladnimada hadda soo bidhaantay.
Dantu waa seeto iyo dabar aan la dhaafi karin, dawlad iyo dadkeedana ma kala maarmaan, mana kala danaysan karaan, siiba maalmuhu waa kala jiraane maalin colaadeed dawladi dadkeeda kama maaranto.
Soomaalidu waxay dhahdaa “talo waa mar aad garan wayday iyo mar aad gaari wayday,” xilligaan la joogana dawladda Puntland waxay haysataa fursad ay khaladkeedii hore ku sixi karto, ugana fakari karto waxa dambe ee imaan kara, si ay ugu kayd dhigato kalsoonida shacabkeeda, kuna abuurto jawi la aamini karo marka asbaabo amni ay yimaadeen.
Al-Shabaab iyo Daacish labaduba fadhiyo ayay ku leeyihiin deegaano Puntland, dagaal lala galaana berri ama beryo ka dambeeya ayuuba imaan karaa, haddii si kale loo dhahana magaalooyinka laftigooda ayaa sidii Gaalkacyo hawgallo ka bilaaban karaan, markaasna dawladda waa u daruuri warbaahinta in ay marsiiso si joogta ah barnaamijyadeeda dagaalka al-Shabaab ka dhanka ah, gacanna ka raadiso warfidiyeennada; balse, waxaa iswaydiin mudan wariyahee asaga oo tan maanta ee Timirre og berri u dhiirran doona hawl amnigiisa dhaawici karta? Wariyahee ku dhiirran doona in uu u bareero tallaabo naftiisa khatar gelin karta, isagoo u jeeda in dawladdu dayacday Wariye Timirre oo shaqo khatarteeda leh kala shaqeeyey dawladda iyo hay’adaheeda ammaanka? Wariyahee ku dhiirran doona ka qaybqaadasha hawl halisi uga imaan karto isagoo arkaya dawlad aan hadhaw difaac iyo gabbaad toona ka siinayn wixii khatar amni ah ee naftiisa soo wajahda?